को हुन डा. डिना बाङदेल?
कतार स्थित दोहामा रहेको भर्जिनिया बिश्वबिद्धालयको कला बिभागको नेतृत्व समालिरहेकी ५४ वर्षिया डा. डिना वाङदेल नेपाली कला बिशषेज्ञ तथा साहित्यकार लैनसिङ वाङदेलकी छोरी हुन। सन १९९८ मा कतार फाउण्डेशनसँगको साझेदारीमा भर्जिनियास्थित कमलवेल्थ युनिभर्सिटीको 'स्कुल अफ आर्टस' अन्तर्गतको कलेजका लागी डिना वाङदेल सन २०१२ देखि कतारमा कार्यरत थिइन।
पारिवारिक स्रोतले बताएअनुसार वाङदेलको रुघाखोकि बिग्रीएपछि सामान्य सल्यक्रिया गरिएको थियो। पिनासको उपचार र सल्यक्रियाकालागी गएको २ साता अगाडी बाङदेल अस्पताल भर्ना भएकी थिइन। मेनिन्जाइटिसको समस्या पनि देखिएको पारिबारिक स्रोतले बताएका छ। उपचारकाक्रममा अस्पतालले मंगलबार बिहान वाङदेलको मृत्यु भएको घोषणा गरेको थियो।
नेपालीकलालाइ बिश्वमाझ चिनाउन पछिल्लो दशक डा. डिना बाङदेल सक्रिय रहेकी थिइन। अमेरिकास्थित ओहायो बिश्वबिद्धालयबाट बिद्धाबारिधी गरेकी डिना बाङदेल पछिल्लो समयमा दक्षिणएसियाली कला सिनेमा र लैँगिक पहिचानका बारेमा समेत अनुसन्धान गरिरहेकी थिइन।
कला बिशषेज्ञ तथा साहित्यकार लैनसिङ वाङदेल दम्पतिकी एकमात्र छोरी डिना बाङदेलकी ९६ वर्षया आमा मनकुमारी बाङदेल, श्रीमान र २ छोरा रहेका छन।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ११, २०७४, ०१:१४:२१